I-2. Sizodlula kwezokuvikela nezinketho onazo. - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Izinzuzo / I-2. Sizohamba phezu Amasosha kanye Izinketho ukuthi une.
Isimo sawo wonke umuntu sihlukile, futhi akuzona zonke izixazululo ezisebenza kuwo wonke umuntu. Isahluko sokuqothuka kwe-7 kungenzeka silungele umndeni owodwa, kodwa wena, kungahle kuvuse iTrust 7 Trustee efuna ukuthengisa ikhaya lakho. Ngaphandle kokudlulela imininingwane ezungeze isimo sakho ngeke sikwazi ukukunikeza izinketho ezingakufanelekela kahle. Uma wenze ukuguqulwa kwemalimboleko esikhathini esedlule, sizobuyekeza ukuguqulwa kwemalimboleko yakho edlule bese sibona ukuthi kungani kwenqatshwa, singabe sesisikisela ukuthi singakuthola kanjani ukuvunywa. Sizokutshela futhi uma imali yakho engenzeka ingakutholi uvunyelwe noma wakhe uhlelo lokukhulisa iholo lakho. Uma ufuna ukuvikela ikhaya lakho enkantolo, sizodlula kuyo yonke imidwebo yasenkantolo ukubona ukuthi ngabe kukhona yini ukuzivikela ongaphuthelwe kukho. Sinamacala afaka insizakalo engafanele, siphenya ngezinto eziphathwe ngokungalungile, izenzo ezingafanele kanye nezinye okwadingeka ukuthi sibuyekeze izincwadi ezazifakwe ngaphambi kokuthi sisho ukuthi kukhona ukuzivikela. Siyaqiniseka ukuthi zonke izinketho zakho zichaziwe futhi sisebenzisa konke ukuvikela okungakusiza ufeze izinhloso zakho.